प्रकाशित : पौष ८, २०७४ | ८८ पटक हेरिएकोसमाचार
चिउँडोले नै भन्छ तपाँई कत्तिको भाग्यमानी? पढ्नुहोस्
हाम्रो शरिरको बनावत सबैको एकैकिसिमको छैन । मानिसअनुुुुसार शरीरका अंगहरु पनि फरकफरक हुन्छन् । हामीलाई लाग्न सक्छ जस्तो सुकै भएपनि अंगको काम त एउटै हो तर यो मात्रै कुरा होइन हाम्रा शरीरका अंगले पनि हाम्रो भविष्यको जनाउ दिइरहेका हुन्छन् । सामुद्रिक शास्त्रले हाम्रो शारीरिक बनावटबाट हाम्रो भविष्य निर्धारण हुने कुरा बताएको छ । यहाँ हामीले कस्तो चिउँडो भएको मानिस भाग्यमानी र कस्तो चिउँडो भएको मानिस कम भाग्यमानी भन्ने कुरा बताइएका छौ खासगरी मानिसलाई सुन्दर बनाउन अनुहारका अंगहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर समुन्द्र शास्त्रका अनुसार अनुहारका अंगहरुको सौन्दर्यजनक मात्र नभएर अरु पनि विभिन्न महत्व छन् । त्यस्तै महत्वपूर्ण अंग हो चिउँडो...Read More
प्रकाशित : पौष ८, २०७४ | ६६ पटक हेरिएकोसमाचार
के तपाईं शनिबार जन्मिनुभएको हो ? हो भने यो अवश्य पढ्नुस्
थुप्रै मानिसको विश्वास छ कि, जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै, दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ । त्यसकारण त आजकालका मानिस आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् । भारतीय अंक ज्योतिष श्रीमती ज्योतिमा शर्माले शनिबार जन्मेका व्यक्तिको निम्नलिखित गुण बताएकी छन् : शनिबार जन्मेका व्यक्ति निकै गम्भीर र जिम्मेवार हुन्छन् । तपाईं निकै मेधावी, बुद्धिमान र बिजनेस माइन्डको हुनुहुन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईं हरेक कुरामा परफेक्ट हुनुहुन्छ । तपाईं हाई क्लास वस्तु मन पराउनुहुन्छ । र, तपाईंले लगाउने...Read More
प्रकाशित : पौष ७, २०७४ | ५९ पटक हेरिएकोसमाचार
यौनेच्छा के हो ? किन गर्छन मानिसहरु यसका लागि मरिहत्ते ?
सामान्य भाषामा यौनसम्पर्क राख्ने वा यौन तनाव शान्त पार्ने इच्छालाई यौनेच्छा भनिन्छ र यौनसाथी भन्नाले यौनसम्पर्क राखिएको व्यक्ति नै बुझिन्छ । भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि मानव जीवनको अभिन्न आवश्यकता हो । यौनेच्छा मानसिक तथा भावनात्मक व्यग्रतासँग सम्बन्धित छ । अधिक यौनेच्छा तथा कम यौनेच्छा दुवै समस्या नै हो । मस्तिष्कको अगुवाइमा सञ्चालन हुने यौनेच्छाका लागि विभिन्न हार्मोनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, तर मस्तिष्कलाई यौनिक रूपमा सक्रिय बनाउने काम भने कल्पना, स्पर्श (घर्षण), दृश्य, गन्ध, ध्वनि, स्वाद आदि इन्द्रिय उपजले गर्छन् । यौन एउटा जटिल प्रक्रियाको क्रियाशिलता हो । मस्तिष्क एवं स्नायु प्रणालीले यौन उत्तेजना तथा यौनाङ्गको क्रियाकलापमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह...Read More